Ian McKellen oo ah Cogsworth Quruxda iyo Dib -u -Bahalka - Dhaqanka Pop
Ian McKellen inuu ku ciyaaro Cogsworth Quruxda iyo Dib -u -Bahalka
Ian McKellen 'Kaalintii xannibaadda' snext blockbuster 'waxay ahaan doontaa saacad ahaan - laakiin ma aha saacad kasta. McKellen wuxuu cayaari doonaa si gaar ah hadalka iyo aftahannimada Cogsworth ka yimid Disney Quruxda iyo bahalkii . Filimkii qadiimiga ahaa ee firfircoonaa wuxuu helayaa dib-u-habayn toos ah, oo markii lagu daray McKellen, kabka ayaa ka sii fiicnaaday: Emma Watson, Emma Thompson, Dan Stevens iyo Luke Evans ayaa durba loo saxiixay filimka.
keega cuntada malaa'igta leh strawberries iyo kareemka kariimka
McKellen wuxuu quluubtayada kula diirsaday inay yihiin tirooyin xigmad leh sida Ganolf oo kale Eebaha siddooyinkii taxane iyoProfessor Xavier ee X-Ragga filimada-laakiin wuxuu sidoo kale xiddig ku lahaa dib-u-soo-nooleyaal badan oo nool, sida Buugga Jungle , Mulan , iyo Pinnochio . Wuxuu u badan yahay inuu u iftiimi doono sidii bahalkii gacanta midig-qalad, alaab guri.
Su’aashu waxay tahay: yaa noqon doona Lumiere? Waa inaan sugnaa oo aragnaa. Dib -u -habeynta Disney ayaa lagu wadaa in tiyaatarada la saaro March 2017, wax soo saarkuna waa inuu bilaabmaa dabayaaqada sanadkan.
sida loo sameeyo keega sanduuqa sida roodhida
[h/t Kala duwan ]
digirta buuxinta peach pie iyadoo la isticmaalayo fersken qasacadaysan
malcolm x wuxuu doonayaa inuu arko walaal johnson
ugu badnaan 3 tilmaame ciyaar